Apple Music Hi-Fi oo la jaan qaadaya Dolby Atmos wuxuu ku yimid qiimo la'aan | Waxaan ka socdaa mac
Layaabku maahan imaatinka Muusiga Apple Hi-Fi. Waxaa horey u jiray warar xan ah iyo tilmaamo muujinaya in Apple adeegyadiisa cusub ee High Fidelity streaming music uu hoos u dhacay, shaki kuma jiro.
Laakiin waa wax lala yaabo in kororkan tayada codka ee Apple Music yimaado Kharash la'aan. Qiimo isku mid ah, tayo maqal badan. Iyada oo leh Muuqaalka Maqalka iyo Dolby Atmos. Ka imanaya Apple, ugub.
Laga bilaabo Juun, waxaad awoodi doontaa inaad dhageysato dhammaan waxyaabaha ku jira Apple Music si aan horay loo arag. Dhawaaq gudaha Aaminnimo Sare, Codka Maqalka y Dolby Atmos. Waxaas oo dhan qiimo isku mid ah oo aad hadda bixiso. Kharash la'aan.
Si aad u qadarin karto dhammaan horumarkan cusub, waxaad u baahan doontaa qalab maqal ah oo hawsha ku habboon. Marka hore, barnaamijka Apple Music waa inuu ku shaqeeyaa a iPhone 12, ama a Mac o iPad dhawaan. Qalabyadan ayaa awood u leh inay soo saaraan Spatial Audio iyo Dolby Atmos.
Dhegahana, dhagaha wax lagu maqlo oo wanaagsan. Waa inay lahaadaan awood ay ku soo saari karaan codka Hi-Fi. Dhamaan AirPods y Beats iyada oo la adeegsanayo qalabka W1 iyo H1 ee Dolby Atmos. Hadda laga bilaabo macno badan ayey leedahay in lacagta lagu bixiyo AirPods Max, shaki la'aan.
Waxan oo dhami waxay marayaan hab maamuuska cusub ee Bluetooth Tufaax ALAC (Koodhka codka ee Apple Looseless). Aynu nidhaahno waa Apple's aptX. Koodh cod maqal ah oo cusub si loogu gudbiyo codka Hi-Fi silig la'aan.
Adeeggan cusub ee Apple wuxuu yimid laga bilaabo Juun dhammaan macaamiisha Apple Music, iyada oo aan kharash dheeraad ah ku bixin. War weyn, shaki la’aan.
Khasaaraha kaliya ee jira, marka laga reebo haysashada samaacadaha dhegaha ee hawsha ku habboon, shaki la’aan waa meesha lagu kaydiyo ee ay degto muusikada Hi-Fi. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa jecel inay qaadaan muusikada ku keydsan qalabkaaga, la soco in Fidelity High, heesahaagu ay ku noolaan doonaa saddex jeer ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Music Hi-Fi oo la jaan qaadaya Dolby Atmos waxay ku timid qiimo la'aan